Leisure – CEO Business & Management Magazine
လာမယ့် ခရစ်စမတ်ကာလနဲ့ နှစ်သစ်ကူးအတွက် ရည်ရွယ်ကာ Meliá Yangonဟိုတယ်ရဲ့ The Market restaurant မှာ အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ တစ်ဦးလျှင် ၃၂ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် ဘူဖေး နေ့လယ်စာ၊ ညစာတွေကို Booking လုပ်စားသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်ညနေ ၅ နာရီမှ ၉ နာရီအတွင်းမှာတော့ Christmas Eve Buffet Dinner နဲ့ ၂၅ ရက် နေ့လယ် ၁၁နာရီခွဲမှ ၃ နာရီအတွင်းမှာတော့ Christmas Day Buffet Lunch တို့ရှိမှာဖြစ်ပြီး၊ ၃၁ ရက် ညနေ ၅ နာရီမှ ၉ နာရီအတွင်းမှာတော့ New Year Eve Buffet Dinner နဲ့ ၂၀၂၂ […]
ဝင်းမြင့်သိန်း ကိုဗစ်ကြောင့် ကမ္ဘာ့ဂေါက်သီးဇာတ်ခုံမှ ဂေါက်ပွဲတွေကမောက်ကမဖြစ်ကုန်သည်။ ၂၀၂၀ အတွက် ဗြိတစ်ရှ်အိုးပင်းမေဂျာပွဲကြီးက ဖျက်သိမ်းခဲ့ရသည်။ ကျန်မေဂျာသုံးပွဲတွင် ဧပြီလ၌ကျင်းပရမည့် မာစတာစ်ကနိုဝင်ဘာလသို့လည်းကောင်း၊ မေလတွင်ကျင်းပရမည့် ပီဂျီအေချန်ပီယံရှစ်ပ်က သြဂုတ်လသို့လည်းကောင်း၊ ဇွန်လတွင်ကျင်းပရမည့် ယူအက်စ်အိုးပင်းက စက်တင်ဘာသို့လည်းကောင်း ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၂၀ ၌ နောက်ဆုံးကျင်းပမည့်မေဂျာပွဲကြီးက မာစတာစ်ဖြစ်လာသည်။ နိုဝင်ဘာ ၁၂-၁၅ တွင်ကျင်းပပါမည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် မေဂျာပွဲကြီးများကို မူလလျာထားသည့်လများတွင်ပင် ပြန်လည်ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ ပထမဆုံးလာမည့်မေဂျာပွဲကြီးက မာစတာစ် (ဧပြီ ၈-၁၁) ဖြစ်နေပြန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လာမည့်မေဂျာပွဲကြီးနှစ် ပွဲဆက်တိုက်မှာ မာစတာစ်ချည်း ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါတော့သည်။ နောက်ဆုံးပြီးစီးခဲ့သော မေဂျာနှစ်ပွဲတွင် အသက် ၃၀ အောက်လူငယ်များဗိုလ်စွဲထားကြသည်။ သြဂုတ် ၆-၉ ပီဂျီအေချန်ပီယံရှစ်ပ်တွင် အသက် ၂၂ နှစ်သာရှိသေးသော ဂျပန်နွယ်ဖွားအမေရိကန်ပရိုလေး ကော်လင်းမိုရီကာဝါနှင့် စက်တင်ဘာ […]
လှုပ်ရှားလာသော ဂေါက်သီးဇာတ်ခုံနှင့် ဖက်ဒိတ်စ်ဖလားချန်ပီယံ
ဝင်းမြင့်သိန်း ကိုဗစ်ကူးစက်မှုလျော့သွားသည်နှင့် ကမ္ဘာ့ဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲများက ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပရိသတ်ကိုတော့ မည်သည့်ပွဲတွင်မျဝင်ကြည့်ခွင့်မပြုသေးပါ။ တိုးအသီးသီးတွင်ပယ်ဖျက်ခဲ့ရသောပြိုင်ပွဲများ၊ ရွှေ့ပြောင်းကျင်းပရသော ပြိုင်ပွဲများရှိခဲ့သဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်စီမံခန့်ခွဲရမှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ အသက် ၅၀ ကျော်များ၏ စီနီယာတိုးခေါ် Champions Tour သည် နှစ်ကုန်တွင်အမှတ်အများဆုံး လူအားအပိုဆောင်းဆုကြေး ဒေါ်လာတစ်သန်းပေးသည့် Charles Schwab ပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်အား ရှေ့နှစ်တွင်မှ နှစ်နှစ်ပေါင်း၍ဆုပေးတော့မည်ဟု ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ယခုနှစ်အတွင်းကျင်းပခဲ့သောပြိုင်ပွဲအရေအတွက်နည်းခဲ့သောကြောင့်ပါ။ အမျိုးသမီးအယ်လ်ပီဂျီအေတိုးသည် မေဂျာပြိုင်ပွဲအချို့အား မူလအစီအစဉ်အတိုင်းမကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါ။ ပွဲစဉ်အချိန်ဇယားများအား ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသည်။ အမျိုးသမီးဗြိတစ်ရှ်အိုးပင်းအား သြဂုတ်၂၀-၂၃၊ ANA Inspiration အား စက်တင်ဘာ ၁၀-၁၃၊ Women’s PGA Ch. အား အောက်တိုဘာ ၈-၁၁၊ US Women’s Open အား ဒီဇင်ဘာ ၁၀-၁၃ တွင်ကျင်းပရန် ပြောင်းလဲစီစဉ်ခဲ့ပါသည်။ အခြားအမျိုးသမီးမေဂျာပွဲကြီးတစ်ပွဲဖြစ်သော […]
၂၀၁၉-၂၀ ပီဂျီအေတိုးရာသီသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက် ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲမှ စတင်ကာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက် Tour Championship ၌ အပြီးသတ်ရန် အချိန်ဇယားရေးဆွဲထားပါသည်။ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြီးဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲများရပ်နားရချိန်တွင် မေဂျာပွဲကြီးတစ်ပွဲမျှမကျင်းပရသေးပါ။ မေဂျာပွဲကြီးများ၏ ယခုရာသီအချိန်ဇယားမှာ မာစတာစ်ကဧပြီလ၊ ပီဂျီအေချန်ပီယံရှစ်ပ်က မေလ၊ ယူအက်စ်အိုးပင်းကဇွန်လနှင့် ဗြိတစ်ရှ်အိုးပင်းကဇူလိုင်လတွင်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်ကြောင့် ဗြိတစ်ရှ်အိုးပင်းက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ပြိုင်ပွဲအားအပြီးဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ကျန်သုံးပွဲက ယခုနှစ်အတွင်းပင်အချိန်ရွှေ့၍ကျင်းပရန် ပြန်လည်စီစဉ်ခဲ့ရာ ပီဂျီအေချန်ပီယံရှစ်ပ်က ဩဂုတ်လ ၆-၉၊ ယူအက်စ်အိုးပင်းက စက်တင်ဘာလ ၁၇-၂၀ နှင့် မာစတာစ်ကနိုဝင်ဘာ ၁၂-၁၅ ဖြစ်လာပါသည်။ ယခုရာသီအတွင်းသို့ ပီဂျီအေချန်ပီယံရှစ်ပ် တစ်ပွဲသာဝင်တော့ကာ ကျန်နှစ်ပွဲမှာ ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီအတွင်းသို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။ ဩဂုတ်လ ၆-၉ […]
Posted On September 29, 2020, By CEO Editors
ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးနှင့် ဆုကြေးအများဆုံးပီဂျီအေတိုးတွင် ဖက်ဒိတ်စ်ဖလား (FedEx Cup) ချန်ပီယံဟူ၍ ရာသီပိတ်နောက်ဆုံးပွဲအပြီးတွင် အမှတ်အများဆုံးရသူအား ဒေါ်လာဆယ်သန်းပေးသောပြိုင်ပွဲကို ဂေါက်သီးဝါသနာရှင်များ သတိထားမိကြပါလိမ့်မည်။ ယမန်နှစ်ကစ၍ ဆုကြေးတိုးပေးခဲ့ပြန်ပါသည်။ အမှတ်အများဆုံးရသူက ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း၊ ဒုတိယက ဒေါ်လာ ငါးသန်း၊ တတိယ ဒေါ်လာ လေးသန်း၊ စတုတ္ထဒေါ်လာ သုံးသန်း၊ ပဉ္စမ ဒေါ်လာ ၂.၅ သန်း စသဖြင့် အမှတ်စဉ် ၁၅၀ က လူအထိ ဆုကြေးချီးမြှင့်ပါသည်။ ထိပ်ဆုံး ၁၂၅ ဦးက နောက် ဆုံးသုံးပွဲဆက်ကစားပြီး အဆင့်လုကြရပါသည်။ နောက်ဆုံးပွဲဝင်ခွင့်မရသော အမှတ်စဉ် ၁၂၆ မှ ၁၅၀ အထိ ၂၅ ဦး ပင် တစ်ဦးလျင် ဒေါ်လာခုနစ်သောင်းစီရကြပါသည်။ ယခုနှစ်ပီဂျီအေတိုးရာသီက ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ […]
ယခုနှစ်ဧပြီလတွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကျ မာစတာစ်ဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲကြီးက မကျင်းပဖြစ်တော့ပါ။ Covid 19 ကို ကြောက်၍ဖြစ်ပါသည်။ မာစတာစ်အကြောင်းတွေးမိသည်နှင့် တိုက်ဂါးအကြောင်း သတိရကြစမြဲပါ။ သူကလက်ရှိချန်ပီယံဖြစ်ပါသည်။ ယမန်နှစ်က သူဗိုလ်စွဲလိုက်သည့်အခါ ဂေါက်သီးရာဇဝင်၌ အကြီးကျယ်ဆုံးသောပြန်လည်နိုးထအောင်ပွဲရမှုကြီးဟု အားလုံးက သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ဂေါက်သီးတွင်သာမဟုတ်ပါ။ အားကစား လောကပေါင်းစုံအတွင်းတွင်ပင် အကြီးကျယ်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံးအောင်ပွဲဟု ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။ မာစတာစ်အကြောင်းတွေးတိုင်း တိုက်ဂါးကိုသတိရခြင်းမှာ သူကဤပွဲကြီးအား ငါးကြိမ် အောင်ပွဲရခဲ့၍လည်း ဖြစ်ပါသည်။ သူထက်အကြိမ်များသူဟူ၍ ခြောက်ကြိမ် ဗိုလ်စွဲခဲ့သူ ဂျက်ခ်နစ်ကလပ်စ်သာ ရှိပါသည်။ ပြန်လည်နိုးထအောင်ပွဲရမှုဟု ဆိုရသည်မှာလည်း တိုက်ဂါးက ၁၉၉၇ မှ ၂၀၀၈ နှစ်အထိ သူ့အသက် ၂၁ နှစ်မှ ၃၂ နှစ်အရွယ်၊ နှစ် ပေါင်း ၁၂ နှစ်အတွင်းတွင် မေဂျာပွဲကြီး ၁၄ ပွဲ […]
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဂေါက်သီးရာသီ၌ လေးနှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပသော အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်၏ ဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲလည်း ပါဝင်နေသည့်အလျောက် ဂေါက်သီးမေဂျာပွဲကြီးများ၏ဇယားက အပြောင်းအလဲဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ အောက်တွင်ကြည့်ပါ။ မတ် ၁၂ – ၁၅ The Players Championship ဧပြီ ၉-၁၂ Masters မေ ၁၄-၁၇ PGA Championship ဇွန် ၁၈-၂၁ US Open ဇူလိုင် ၁၆-၁၉ British Open ဇူလိုင် ၃၀- သြဂုတ် ၂ Olympic Golf Competition မေဂျာပွဲကြီးလေးပွဲအပြင် The Players Ch. အား ဖော်ပြရခြင်းမှာ ဤပွဲအားဂေါက်သီးပရိုများက ပဉ္စမ မေ ဂျာပွဲကြီးအဖြစ် မှတ်ယူကြသောကြောင့်ပါ။ ဤပွဲမှာ ပီဂျီအေတိုး၏ ဦးစီးဦးဆောင်ပွဲကြီးဖြစ်ပြီး ဤပွဲ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ […]
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကတော့ ကုန်ခဲ့ပါပြီ။ ထူးထူးခြားခြား အောင်ပွဲများရှိခဲ့သောနှစ်များပါ။ အဖြေပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားသော အသင်းလိုက်ပြိုင်ပွဲများ၊ ထူးချွန်လှသည့် တစ်ဦးချင်းစွမ်းဆောင်မှုများ၊ ရာဇဝင်တွင်သည့် ပြန်လည်နိုးထအောင်ပွဲရမှုများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၂ ရိုက်ဒါဖလားပြိုင်ပွဲ အမေရိကန်လက်ရွေးစင်အသင်းနှင့် ဥရောပလက်ရွေးစင်အသင်းတို့ နှစ်နှစ် တစ်ကြိမ်ယှဉ်ပြိုင်ကစားသော ရိုက်ဒါဖလား (Ryder Cup) ပြိုင်ပွဲသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်က အမေရိကမြေပေါ်တွင် အလှည့်ကျပါသည်။ ယခင်နောက်ဆုံး အကြိမ်က ၁၄ မှတ်ခွဲ ၁၃ မှတ်ခွဲဖြင့်ကပ်၍အနိုင်ရခဲ့သော ဥရောပအသင်းအတွက်မှာ ယခုအမေရိကမြေပေါ်တွင် တော့ သိပ်မလွယ်လှဟုထင်ရပါသည်။ ထိုနှစ်က အမေရိကန်အသင်းတွင် တိုက်ဂါး၊ ဖီးလ်မစ်ကယ်ဆင်၊ ဒပ်စ်တင်း ဂျွန်ဆင်၊ ဂျင်မ်ဖျူးရစ်ခ်၊ စတိဗ်စထရစ်ကာ၊ ဘတ်ဘာ ဝပ်တ်ဆင် မက်တ်ကူချာ၊ ဇက်ခ်ဂျွန်ဆင်၊ ဝက်ဘ်ဆင်မ်ဆင်၊ ဂျေဆင်ဒပ်ဖ်နာ၊ ကီဂင်ဘရက်ဒ်လီ၊ ဘရန့်စနဲ ဒက်ကာတို့ ပါဝင်သလို ဥရောပအသင်းတွင်လည်း လုခ်ဒေါ်နယ်၊ […]
”အန်ကယ်ကြီး၊ အန်ကယ်ကြီး” ”ဟေ ဘာများဖြစ်လာတာလဲ သူဌေးလေးရယ်” ”ဂေါက်သီးမှာ လက်ကောင်းဖို့မလိုဘူး။ ဘက် (ပါတနာ) ကောင်းဖို့ပဲ လိုတယ်ဆိုတာ ဟုတ်လားဟင်။” လူမစုံသေးလို့ ထောပတ်သီးဖျော်ရည် ထိုင် သောက်နေတဲ့ အန်ကယ်ကြီးကို သူဌေးလေးက မေးလိုက်တယ်။ ”ဘာတွေများ စိတ်ကူးပေါက်လာရပြန်တာလဲ သူဌေးလေး” ”အန်ကယ်ကြီးကတော့ နောက်ပြီ။ ဟိုမှာ မေးခွန်းမေးတဲ့သူတွေကျနေတာပဲ။ ခပ်ဆင်ဆင်ဝါကျ တွေနဲ့။” ”ဟေ့ ဟေ့၊ ဘယ်က ဟိုပါလာရတာလဲ။ ဘာခပ်ဆင်ဆင်ဝါကျလဲ၊ ရှင်းရှင်းပြော။” အန်ကယ်ကြီးက မျက်နှာတည်တည် လေသံ ပြတ်ပြတ်နဲ့ မေးတယ်။ ”ဒီလို အန်ကယ်ကြီးရဲ့။ တချို့လူတွေဆို လက်ရည်က ကောင်းကောင်းမကောင်းလှပေမယ့် လက်ကောင်းတဲ့သူနဲ့တွဲတော့ အများအားဖြင့်နိုင်ကြတယ်လေ။” သူဌေးလေးက မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ပြန်ဖြေ တယ်။ ”ဒါကြောင့် ထိုင်းကဂေါက်ကွင်းတချို့မှာ ဂေါက်သီးရိုက်သူတချို့က အကောင်းဆုံးရိုက်ချက်နဲ့ ပါတနာနှစ်ယောက်ပေါင်းရိုက်ချက် […]
တိုက်ဂါးက သူအိမ်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပသည့် Hero World Challenge ဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲအား တစ်ရက်စော၍ ကျင်းပခဲ့သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကြာသပတေးနေ့တွင်စတင်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ပြီးရမည့်ပွဲအား ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်စတင်၍ စနေနေ့တွင် အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခု နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်မှ ၇ ရက်အထိ ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်တွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့၌ကျင်းပမည့် သမ္မတများဖလားပွဲသို့ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်နှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန် အချိန်တစ်ရက်ပိုရလိုသောကြောင့်ပါ။ တိုက်ဂါးက အမေရိကန်လက်ရွေးစင်အသင်း၏ လက်ရွေးစင်အဖြစ်သာမက လူ ထွက်မှု၊ လူတွဲမှုစသည်များကိုစီစဉ်ရသူ အသင်းကပ္ပတိန်အဖြစ်ပါ တာဝန်ယူထားရပါသည်။ သမ္မတများဖလားသည် အမေရိကန်လက်ရွေးစင် ၁၂ ဦးနှင့် ဥရောပမပါဝင်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လက်ရွေးစင် ၁၂ ဦးတို့ အသင်းလိုက်ယှဉ်ပြိုင်ရသော ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ဂါးအိမ်ရှင်လုပ်သည့် Hero World […]